कोरोना महामारीमा त दयामाया देखाउ ए नेता हो
जेष्ठ ३ २०७८, सोमबार
स्मृति मोक्तान / जापान
मेरो देशको कुर्सीको अस्तित्त्व नबुझ्ने नेताहरु
क्षितिज पारिको देशबाट अभिवादन खै कसरी कुन शब्दले बयान गरु म । मेरो नेपाल आमा र नेपाली आमाको सन्तानहरु आज अझै पनि खानु छ लाउनु छ बाँच्नु छ । मलाई बचाउ म बाँच्न चाँहन्छु भन्दा भन्दै मृत्यु भन्ने शब्दले जितिरहेका छन्। कोरोनाको महामारीले भयाभह रुप धारण गरिरहेका बेला नेताहरु भने कुर्सीको दाउपेचमा लागेको देख्दा निकै दुख लागेको छ । आम सर्वसाधारण र गरिबहरुले न अस्पतालमा राम्ररी बेड पाएका छन् त न शव जलाउने स्थान ।
सिधा र सोझा जनताहरु दिनकै सयौको निधन भइरहँदा कुर्सी प्रेमी नेताहरुले यसरी मानवीयतालाई बिर्सीन मिल्छ ? एउटा कुर्सिको लागि तछाड मछाड गर्दा जनताले भने चिन्ने अवसर पाएका छन् । कति प्यारो है त्यहि कुर्सिमात्र ? यदी मानवता भएको भए यो बेला नारा जुलुस होईन हॉस्पिटल औषधि उपचार अक्सिजन नपाएर तड्पिरहेका जनतालाई औषधि उपचार अक्सिजन पुर्याईदिनुपर्छ । ए नेता गिरीहरुहो गरिब र निमुखालाई रातो कार्पेटको समाचारले यातना नदेउ । केवल नाङगो आङ ढाक्ने कपडा देउ । करोडौको गाडी होईन ओत लाउन झुपडी देउ र एक छाक खान देउ । बल्ल तिमीहरु भगवान् बन्छौ । नत्र तिमीहरुलाई समय आएपछि जनताले लात हान्न बेर लगाउँदैनन् ।
कति सुन्नु त्यो जोक्सहरुपुर्व बाट पश्चिम रेल दौडाएर देखाउछु भन्ने । नेपाललाई स्वजरल्याड बनाईदिन्छु भन्ने । घरघरमा ग्यास पानि जोडिदिन्छु भने कहिलेसम्म झुट र भोटको खेती गरिरहने ? माथिल्लो पदमा पुगेर जनता झुक्याउने खेल अब नेपाली जनताले सहन सक्दैनन् । बुझिराख नेताहरु जनता बिना तिमीहरुको खैरियत छैन । जनता नभएको झोले नेता कसरि बन्थे किन नसोचेको ?
कतिको सिन्दुर पुछिएको छ कति बालबालिका टुहुरो भको छ कति भोकभौकै सडकमा लडिरहेको छ कति बिधुवा भएका छन् । ति पिडितहरुको दुस्खको आँशुले देश तलाउ बनिसक्यो। बिरामीहरुको दर्दनाक पिडा देखेर डाक्टर नर्स भन्छन्, “बिरामिको अक्सिजन सक्न लागे पछि मुटु कामेर आउछ”सायद अक्सिजनको कमि नभको भए बिरामिहरुलाई बचाउन सकिन्थ्यो की ? खै यि कुराहरुले नेता भनाउँदाहरुलाई छोएको ? ए नेताहरु हो कम्तिमा अक्सिजन सम्म त पुर्याई देउ । तिमीहरुका तिता मिठा भाषण र झगडाले जनता आजित भइसके अब त काम गरेर देखाउ । नत्र तिमीहरुको ओरालो लाग्ने दिन धेरै टाढा छैन चेतना भया ।